Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Eminyakeni edlule, bekufanele ngenze ukuhlaziywa okukhulu kwezezimali ukuze inkampani yami ibone ukuthi ukunyuka kwamaholo kungayinciphisa yini imali yabasebenzi, izindleko zokuqeqesha, ukukhiqiza, kanye nokuziphatha okuphelele kwabasebenzi. Ngikhumbula ngisebenzisa futhi ngihlola amamodeli amaningi amasonto, konke ngiphetha ngokuthi kuzoba nokonga. UMqondisi wami wayengumfana ongakholeki futhi wangicela ukuthi ngibuyele emuva ngiyobahlola futhi ngaphambi kokuthi sinqume ukukhipha amaholo abasebenzi abangamakhulu ambalwa.
Isikhathi sokufunda: 5 imizuzu Kuyathakazelisa ukufunda ukubikezela kukaGartner kobuchwepheshe obuphezulu be-10 ngo-2011… nokuthi cishe konke ukubikezela okukodwa kukuthinta kanjani ukumaketha kwedijithali. Ngisho nentuthuko ekugcinweni nasehardware inethonya emakhono ezinkampani okuxhumana noma ukwabelana ngolwazi namakhasimende namathemba ngokushesha nangempumelelo. Ama-Top Ten Technologies we-2011 Cloud Computing ka-XNUMX - Izinsizakalo ze-Cloud computing zikhona ngokuhlangana okuvela emphakathini ovulekile kuya kokuyimfihlo okuvaliwe. Iminyaka emithathu ezayo izoletha ukulethwa